အဆင့် ၃ ရောက်လာတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ ဇလာတန် ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို နဲ့ . . . နံနက်ခင်းအားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
အဆင့် ၃ ရောက်လာတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ ဇလာတန် ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တဲ့ ရိုနယ်ဒို နဲ့ . . . နံနက်ခင်းအားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ချဲလ်ဆီး ဟာ အဝေး ကွင်းမှာ ပဲလေ့စ် အသင်း ကို ၃ – ၂ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး လက်စတာ အသင်း ထက် ၁ မှတ် အသာ နဲ့ အဆင့် ၃ နေရာကို ရယူ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ချဲလ်ဆီး အတွက် ဂျီရူး ၊ ပူလီဆစ် နဲ့ တမ်မီ အေဘရာဟမ် တို့က တစ်ဂိုးစီ သွင်းယူ ပေးခဲ့ ကြပါတယ် ။ အာဆင်နယ် နဲ့ လက်စတာ တို့ ကတော့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ပြီး ရွှေဖိနပ်ဆု အတွက် အပြိုင် ဖြစ်နေတဲ့ ဗာဒီ နဲ့ အော်ဘားမီးယန်း တို့ ၂ ဦးစလုံး ဂိုးတွေ သွင်းနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
အာဆင်နယ် က ဝယ်ယူပြီး ပြန်လည် အငှားချ ထားတဲ့ နောက်တန်း ကစား သမားလေး ဝီလ်ယံ ဆလီဘာ ရဲ့ စာချုပ် ဟာ ဇွန်လကုန် မှာ ပြည့်မြောက် ခဲ့ ပေမယ့် စိန့်အက်တီယန် ကတော့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ မှာ ကစားမယ့် ပြင်သစ် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ မှာ ဆလီဘာ ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြု လိုကြောင်း အာဆင်နယ် ထံ တောင်းဆို ထားတယ် လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဆဲလ်တစ် အသင်း ဟာ ဖူလ်ဟမ် ဂိုး သမား မားကပ်စ် ဘတ်တီနယ်လီ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဟာလည်း မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ အတွက် ကမ်းလှမ်းမှု စတင် ဖို့ ပြင်ဆင် နေပြီ လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဝုဗ် တောင်ပံ ကစား သမား အာဒမာ ထရာအိုရေး ကို ယူဗင်တပ် ၊ မန်စီးတီး နဲ့ အသင်း ဟောင်း ဘာစီလိုနာ တို့ က စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်လို့ လည်း သတင်း ကြားသိ ရ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ဟာ စပါး မှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ အန်ဒွန်ဘီလီ နဲ့ ရိုင်ယန် ဆစ်ဆဂ်နွန် တို့ကို နွေရာသီ မှာ ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ မကောင်းမွန်တာ ကြောင့် ဒေဝါလီ ခံရတော့မယ့် ဝီဂန် အက်သလစ် အသင်း ကို တစ်မြို့တည်း ရက်ဂ်ဘီ အသင်း ဖြစ်တဲ့ ဝီဂန် ဝါးရီးယား အသင်း ပိုင်ရှင် က ဝယ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် မှာတော့ အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ က နှစ်သင်း စလုံး ရှုံးနိမ့် ခဲ့ ပါတယ် ။ လာဇီယို ဟာ အဝေးကွင်းမှာ လက်ချီ အသင်းကို ၂ – ၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး ယူဗင်တပ် ကတော့ အေစီမီလန် ကို အဝေးကွင်း မှာ ၄ – ၂ နဲ့ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အတွက် ရာဘီယော့ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ က ဂိုးတွေ သွင်းပေးခဲ့ပြီး ပထမပိုင်းမှာ ၂ – ၀ နဲ့ ဦးဆောင် နေပေမယ့် ဒုတိယပိုင်း မှာတော့ ဇလာတန် က ပင်နယ်တီ ကနေ အေစီမီလန် အတွက် စတင် ချေပ ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဂိုးတွေ ဆက်တိုက် ရလာကာ ပွဲအပြီး မှာတော့ ၄-၂ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အတွက် ဒီပွဲဟာ မျက်နှာငယ် စရာ ဖြစ်ခဲ့ရ ပေမယ့် လာဇီယိုလည်း ရှုံးနိမ့် သွားတာ ကြောင့် ချန်ပီယံ ဆု အတွက် ဖိအား မရှိဘဲ7မှတ် အသာ နဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင် နေခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဗလင်စီယာ က ဗယ်လာဒိုးလစ် အသင်း ကို ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဆယ်တာဗီဂို နဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် တို့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျသွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဆာကာ နဲ့ မာတီနယ်လီ တို့ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ဝမ်းသာ ပီတိ စကား ပြောကြားလိုက်တဲ့ အူဘာမီယန်း
လာဇီယို ရဲ့ရှုံးနိမ့်မှု ကို အခွင့်အရေး မယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ ဂိုးပြတ် ပါ အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ ဂျူဗင်တပ်